China nnukwu compost igwe maka anụ ụlọ ehi nsị compost windrow Turner
Anụmanụ nri nsị Compost Turner
M6300 bụ igwe kachasị na-arụ ọrụ igwe na-arụ ọrụ na China, onye ọrụ ya bụ 6.5m, na ogo ya bụ 2.5m. O nwere ike na-akpaghị aka zuru ezu n'aka, nwuo, mix, azọpịa na oxygenate composting ihe, na ịgba usoro nwere ike tinye mmiri na ferment na composting ihe. M6300 nwere ike inye aka ịkwalite ihe ndị a na-emepụtanụ iji nweta gbaa ụka ọsọ ọsọ ma ghọọ fatịlaịza na-edozi ahụ.
Etiti oge: Bọchị 30
Ụdị: Na-akpali onwe ya
Obosara Oru: 6500mm
Herụ Ọrụ Elu: 2500mm
Arụ ọrụ ikike: 3780m³ / h
Banyere ozuzu anumanu
Site na mmepe ngwa ngwa nke ozuzu oke, otutu nsị nke nsị anụ ụlọ na-esi ike obibi. Dabere na Mịnịstrị nke Ugbo China, China na-ewepụta ihe ruru ijeri tọn 4 nke mkpofu anụmanụ kwa afọ.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na anyị na - atụpụ nsị anụ na gburugburu ebe obibi na - enweghị usoro mmụta sayensị?
Iji ezigbo uru nke anụmanụ ndị a ma mee ka ọ baa uru organic fatịlaịza site TAGRM’s compost ntụgharị.
1. Mee ka ihe na-edozi ahụ dị ihe dị ka 50%. Abụkarị anụ ụlọ nri kwesịrị itinye ụfọdụ ọchịchị n'efu na-akọ ugbo ahihia, osisi uyi kwesịrị tinye ụfọdụ ọchịchị sludge, wdg
2. Mee mkpo akụrụngwa compost nke nwere ike dabara maka compost Turner wo na-arụ ọrụ n'ime.
3. Tụgharịa, agwakọta, azọpịa na ikuku oxygen compost na mgbe niile, enwere ike ịchọrọ mmiri ma ọ bụ gbaa ụka.
4. Lelee usoro gbaa ụka na nsonaazụ. Mgbe isi compost dị mma, agba nke compost dị nso na agba aja aja, usoro compost na-atọpụ, C / N <0.6, ọnọdụ okpomọkụ dị mma ma yie ọnọdụ okpomọkụ nke gburugburu ebe obibi, gbaa ụka na-aga nke ọma.
.Dị M6300 Idozi ala 100mm H2
Ike ọnụego 250KW （340PS） Nrụgide nke ala 0.82Kg / cm²
Ọnụego ọsọ 1800-2500 r / nkeji Obosara na-arụ ọrụ 6300 ~ 6500mm Max.
Oriri mmanụ ≤235g / KW · h Ọrụ dị elu 2500mm Max.
Batrị 24V 2 × 12V Ikpo udi Triangle 42 Celsius
ike mmanụ 320L Gaanụ ọsọ L: 0-8m / nkeji H: 0-24m / nkeji
Crawler zọcha 6885mm W2 N'azụ ọsọ L: 0-8m / nkeji H: 0-24m / nkeji
Nha crawler 2250 × 400mm Gwè na akpụkpọ ụkwụ Nri n'ọdụ ụgbọ mmiri obosara 6885
Ojuju 7535 × 2895 × 3100 mm W3 × L1 × H1 Na-atụgharị okirikiri 3900mm Nkeji
Ibu ibu 11000kg Enweghị mmanụ Drivegbọala ọnọdụ Njikwa hydraulic
Dayameta nke ala 979mm Jiri mma Ike ịrụ ọrụ 3780m³ / h Max.
Mbukota na mbupu
A ga-ebunye M6300 compost Turner na 40 HQ. Isi akụkụ nke compost igwe ga-juru n'ọnụ ke ịgba ọtọ, ndị fọdụrụ akụkụ ga-juru n'ọnụ na igbe ma ọ bụ plastic echebe. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla pụrụ iche chọrọ maka mbukota, anyị ga-abịa dị ka arịrịọ gị.
Weebụ: + 86-15177788440
Ekwentị: + 86-15177788440
Nke gara aga: World ama compost windrow Turner maka anụ ụlọ ehi nri
Osote: Ogwurugwu nke ndi ochichi nke ndi mmadu na-acho onwe ha
ezi nri igwe
ezi nri compost Ndinam igwe
ezi nri compost igwekota
ezi nri compost Turner
ezi nri compost windrow Turner
World ama compost windrow Turner maka livesto ...
Hot ire compost Ndinam igwe maka anụ ụlọ a ...
Factory price ọbọgwụ nri compost Ndinam igwe ...
OA ọgazị nri fatịlaịza windrow Turner onwe-pro ...
Cheap compost inggwakọta igwe n'ihi na anụ ụlọ hors ...
TAGRM compost windrow Turner maka anụ ụlọ elep ...